विष्णु पौडेल काण्ड सेलाउन नपाउँदै कपिलवस्तुमा ‘अरिँगाल’को यौनकाण्ड::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
तौलिहवा- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका सुर्ती व्यापारी अर्जुन श्रेष्ठले आफ्नै उद्योगमा काम गर्ने १५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेर फरार भएका छन् । बलात्कार अभियोगमा जिल्ला कार्यालय कपिलवस्तुमा उजुरी परेपछि श्रेष्ठ फरार भएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी प्रमुख एसपी दीपशम्शेर जबराका अनुसार अर्जुन श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत कपिलवस्तुबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बलात्कार अभियोग लागेका श्रेष्ठ फरार रहेको एसपी जबराले जानकारी दिए ।
‘आफ्नै उद्योगमा काम गर्ने १५ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा अर्जुन श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी परेको छ । उहाँलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी पनि जारी भएको छ’, एसपी जबराले भने, ‘खोजतलास जारी छ । अर्जुन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर कारबाही हुन्छ ।’ आफूलाई नेकपा निकटको पत्रकार बताउने श्रेष्ठले सुर्तीको ठूलो व्यापार गर्दै आएका छन् ।
बालिका बलात्कार गर्ने सुर्ती व्यापारी श्रेष्ठले पक्राउ पर्नबाट बच्नका लागि सत्तारुढ नेकपाका ठूला नेताहरूलाई भेटेर बचाउन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठले पीडित बालिकाको परिवारलाई मुद्धा फिर्ता लिएर मिल्न नेकपाका नेताहरूमार्फत दवाव दिएको खुलासा भएको छ । सुर्ती व्यापारी श्रेष्ठलाई बलात्कार काण्डबाट बचाउन नेकपा कपिलवस्तुका केही नेताहरू सक्रिय रुपमा लागेको आरोप छ ।
जेठी पत्नी हुँदा हुँदै आफ्नै सहोदर भाञ्जीलाई यौनकाण्ड मच्चाएका व्यापारी श्रेष्ठले १५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेपछि उनको अर्को कालोकर्तुत बाहिर आएको छ । कपिलवस्तुका पत्रकारहरूले श्रेष्ठको बलात्कारको समाचार लेख्न डराएका छन् । सत्तारुढ नेकपा निकट मानिने सुर्ती व्यापारी श्रेष्ठले आफूलाई पत्रकारका रुपमा परिचय दिने गरेका छन् ।
केपी ओलीका सल्लाहकार अलीका कर्तुतविरुद्ध एकजुट भए २१ सम्पादक !
‘कात्रोमा पनि कमिसन’ भन्दै कांग्रेसले माग्यो स्वास्थ्य मन्त्रीको राजिनामा